Puntland iyo Iskorogada dhagaxa wada | allsanaag
Puntland iyo Iskorogada dhagaxa wada
Puntland, Beelaha Dishiishe iyo Dubays iyo Isko rogooyinka dhagaxa wada.
Beelaha walaalaha ee wada dega Puntland , oo qarniyo badan sida nabada iyo walaaltinimada ah ku wada noolaa ama ku wada deganaa goboladaas, oo beel walba oo ka tirsan beelaha Harti lagu ixtiraami jiray degaanadeeda ay gaarka u leedahay, ayaa sidii maamulka Puntland loo wada samaystay waxa soo if baxday Jufooyin ka mid ah beesha Majeerteen oo doonaya iyaga oo ka faaiidaysanaya awooda maamulka Puntland inay xoog ku degaan degaano ayna horay u degi jirin ama u hawaysan jirin ,
Beelahan reer Puntland oo duulaanka ku ah inay samaystaan degaanada cusub ayaa hub ahaan waxay u wataan Iska Rogooyinka dhagaxa qaada, oo bil walba waxay dhagax dhigtaan dhul cusub oo ay doonayaan inay degaamaystaan.
Labada beelood oo dhulkooda duulaanka lagu yahay waa beelaha Dishiishe iyo Dubays, Mararka qaarkood sida xaqiiqda ah, Beesha Majeeteen iyo beesha Dishiishe degaanada ay isku haystaan waa dhul ay horay u Degnaan jireen ama ay gaar u lahaayeen beesha Dubays ee Warsangeli.
Dhulka ugu badan oo la rabo in la degaameeyo oo maanta laysku haystaa waa inta u dhaxaysa Carmo iyo Ceel Daahir, Carmo sida lagu sameeyey qof walba waa ka dheregsan yahay. Dhulka kale oo isha lagu hayo oo loo soo tukubayaa waxa ka mid ah Afdiinle,
Hadaba waa kuwama Jufooyinka Majeerteen ee wata Iska rogooyinka dhagxu ku raran yahay oo doonaya inay degaamaystaan dhul ayna horay u degi jirin, waa Cismaan Maxamuud, Cali saleemaan, Ugaar saleemaan iyo Wabeeneeye.
Ugu danbayntii mid ka mid ah siyaasiyiintii ka danbaysay in magaalada Carmo laga dhigo degaan Majeerteen iyaga oo ka faaiidaysanaya maamulka Puntland, ayaa maalin maalmaha ka mid ah wuxuu tegay buuraha Calmadow. Siyaasiyiin la socday oo ka soo jeeday Beesha Warsangeli ayaa isaga oo kaftan uga dhigaya wuxuu ku yiri ” Heedhe sidee Buurtan qurxoon ku hesheen ilaa qabiil yar baad tihiine ” Jawaabtii la siiyey waxay noqotay ma rabtaa inaad soo aragto qabuuraha beeshaadu gaarka u leeyihiin ee ku aasan buurtan oo damaca waalani uu horay u soo qaaday . Waa la tusay qabuurihii reerkiisa, Taariikh iyo Cashar ayeey u noqotay. Maanta in Ceel Daahir, Carmo, Galgala, Afdiinle, Laag muran la gesho waxa keenay waa Majeerteen oo isticmaalaya Kaadhka Cumar iyo Dubays. Waxaana isticmaalaya kaadhkan wiilal abtiyo loo yahay oo ay dhaleen beesha Dubays oo sidii ay Carmo kaadhkan ugu samaysteen doonya in maalin walbo Iskorogo dhagaxa dhigtaan degaano ayna horay u degi jirin
← Muqdisho Mooryaanimo ka dhmaan mayso Qalabkii Qorsheel bilaabay ee lagu hagi lahaa Hawada Soomaaliya oo la keenay Muqdisho →